Wararka Suuqa Maanta: Aubameyang, Cavani, Mata, Mbappe, Alli, Raphinha | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Ciyaaraha Wararka Suuqa Maanta: Aubameyang, Cavani, Mata, Mbappe, Alli, Raphinha
Wararka Suuqa Maanta: Aubameyang, Cavani, Mata, Mbappe, Alli, Raphinha
Leeds United ayaa isha ku haysa saxeexa khadka dhexe ee Juventus ee Weston McKennie oo ilaa 20 Milyan oo pound iibkiisu ku kici doono. (Sun)
Juventus ayaa xiisaynaysa weeraryahanka kooxda Arsenal ee Pierre-Emerick Aubameyang oo mustaqbalkiisa Emirates shaki weyni ku jiro kaddib markii masuuliyada kabtanimo ee kooxdaas laga qaaday. (Tuttosport)
Manchester United weeraryahankeeda Edinson Cavani ayaa ah bar-tilmaameedka koowaad ee Barcelona ee suuqa xagaaga balse Barca ayaa marka hore doonaysa inay hubiso haddii uu taam buuxa yahay. (Spor)
Sidoo kale Juan Mata oo 33 sano jir ah ayaa bartilmaameed ah Barcelona isaga oo wakhti ciyaareed ka la’ Manchester United. (Star)
Manchester United ayaa diyaar u ah inay Chelsea kula xifaaltanto saxeexa daafaca dhexe ee Jules Kounde oo ka tirsan Sevilla. (AS)
Liverpool tababaraheeda Jurgen Klopp ayaa sheegay in kooxdiisa Liverpool aysan ku dhawayn inay wax saxeex ah samayso suuqa January balse haddiiba ay samaynayaan aysan la wareegi doonin ciyaaryahanada aan ka talaalnayn Korona Fayras. (Mirror)
Newcastle ayaa xiisaynaysa inay suuqa January u dhaqaaqdo saxeexa Anthony Martial oo Man United ka tirsan halka sidoo kale uu bartilmaameed u yahay weeraryahanka Inter Milan ee Edin Dzeko. (Sun)
Paris St-Germain agaasimaheeda Leonardo ayaan iska dhiibayn aragtida ah inay heshiis cusub ka saxeexdaan Kylian Mbappe oo Real Madrid lala xidhiidhinayo, Mbappe ayaa laga bilaabo January awoodi doona inuu kooxaha France ka baxsan wadahadalo la bilaabo. (AS)
Paris St-Germain ayaa doonaysa inay tijaabiso xaalada kooxda Barcelona ee da’yarka khadka dhexe ee Gavi. (El Nacional)
Si kastaba, tababare Xavi ayaa shalay sheegay in Gavi yahay mustaqbalka kooxda. (90 Min)
Newcastle ayaa lala xidhiidhinayaa inay la saxeexan doonto khadka dhexe ee Tottenham ee Dele Alli marka qaabka amaahda ah lagu heli karo suuqa January. (Football Insider)
Daafaca dhexe ee kooxda Lille ee Sven Botman oo sidoo kale bartilmaameed u ah Newcastle ayaan hubin haddii uu January ka tagi doono kooxda horyaalka Ligue 1 difaacanaysa. (90min)
Manchester City ayaa sanadka cusub wadahadalo heshiis kordhin ah la furi doonta daafaca Joao Cancelo. (Star)
Tottenham tababaraheeda Antonio Conte ayaa kala hadlay Arturo Vidal suurogalnimada uu Spurs ugula soo biiri karo, 34 sano jirkaas ayay Conte Serie A soo wada qaadeen laba wakhti oo ay wada joogeen Inter iyo Juventus. (La Tercera)
Napoli ayaa samaysatay liis ciyaaryahano ay bartilmaameedsan karto oo uu ku jiro daafaca dhexe ee Tottenham ee Davinson Sanchez. (Corriere dello Sport)
Bayern Munich ayaa xagaaga dambe ku biiri doonta tartanka garabka kooxda Leeds United ee Raphinha. (TodoFichajes)
Arsenal ayaa xiisaynaysa garabka weerar ee kooxda Juventus ee Dejan Kulusevski. (CalcioMercato)
Roma tababaraheeda Jose Mourinho ayaa doonaya inuu weeraryahankiisa Tammy Abraham kooxda ka caawiyo saxeexa saaxiibkiisii Chelsea ee Ruben Loftus-Cheek oo 25 sano jir ah iyo sidii lagu keeni lahaa gegida tadio Olimpico. (Star)
Christian Eriksen ayaa ku riyoonaya inuu markale kubad ciyaaro kaddib markii la kansalay heshiiskiisii Inter Milan, sidaas waxa yidhi wakiilkiisa. (Mail)
YAA MUDAN INUU MADAXWAYNE KA NOQDO SOMALIYA #2022 #TOOS
Rooble oo Hanjabaad wax looga qaadi waayay, Go’aanka Gudiga Doorashada. Fashilka...
Xavi oo Ka Hadlay Mustaqbalka Frenkie de Jong iyadoo Manchester United...